ဖိုင်များ (သို့) ဖိုင်တွဲများကို Linux ထဲဘယ်လိုရွှေ့ပြောင်းမလဲ။ | Linux မှ
ဖိုင်များ (သို့) ဖိုင်တွဲများကို Linux ထဲဘယ်လိုရွှေ့ပြောင်းမလဲ။
နေခြည် | | သင်ခန်းစာများ / လက်စွဲ / သိကောင်းစရာများ
ကျွန်တော်တို့အများစုကလျှင်မအကြီးဆုံးအပိုင်းကျွန်တော်တို့ဟာ graphical interface ကိုသုံးလေ့ရှိတယ် သို့ဆိုလျှင် desktop ပတ် ၀ န်းကျင်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ရွေ့လျားခြင်း, တည်းဖြတ်ခြင်း၏တာဝန်များကို, အခြားအမှုအရာဖိုင်တွေသို့မဟုတ်ဖိုင်တွဲများအကြားအမည်ပြောင်း ၎င်းတို့သည်များသောအားဖြင့်ကလစ်နှစ်ချက်နှိပ်ရုံဖြင့်ရိုးရှင်းသောနည်းလမ်းဖြင့်ပြုလုပ်လေ့ရှိသည်။
ဒါပေမဲ့ ဆာဗာတစ်ခုပေါ်တွင်ဤလှုပ်ရှားမှုများကိုသင်အသုံးပြုသောအခါဘာဖြစ်မည်နည်း ၎င်းတို့အများစုကိုများသောအားဖြင့် command console မှသာစီမံခန့်ခွဲသောကြောင့်၎င်းသည်များသောအားဖြင့် dedicated servers များတွင်သိမ်းပိုက်ထားသည် ဒီဟာကိုဘယ်လိုလုပ်ပြီးသိတာလဲဆိုတာဘယ်တော့မှမနာပါဘူး ဘယ်လောက်အလုပ်များနိုင်မယ်ဆိုတာမင်းဘယ်တော့မှမသိဘူး
အချို့သောအချိန်များတွင်ကျွန်ုပ်သည် graphical environment ကိုဆုံးရှုံးခဲ့ပြီး၎င်းကိုပြန်လည်ရယူရန် console ကိုအသုံးပြုရမည်ဖြစ်သော်လည်းကျွန်ုပ်သည်အခြားအချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။
နေ့ ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုကူညီမယ့်ရိုးရှင်းတဲ့ command အချို့ကိုငါဝေမျှဖို့လာတယ် ဖိုင်များကိုကူးယူခြင်း (သို့) ရွေ့လျားခြင်းလုပ်ငန်းများကိုလုပ်ဆောင်ရန်။
chmod နှင့်အတူ GNU / Linux တွင်အခြေခံခွင့်ပြုချက်များ
1 ဖိုင်များ (သို့) ဖိုလ်ဒါများကို Linux တွင်မည်သို့ရွှေ့ရမည်နည်း။
2 ဖိုင်များကို Linux တွင်မည်သို့ကူးယူရမည်နည်း။
ဖိုင်များ (သို့) ဖိုလ်ဒါများကို Linux တွင်မည်သို့ရွှေ့ရမည်နည်း။
ပထမ ဦး ဆုံးအရာတစ်ခု terminal ကိုရှိသည်ဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် ဒါတွေအားလုံးကိုကူညီရာမှာငါတို့ရဲ့ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်လိမ့်မယ်။ \_ t ဒုတိယတစ်ခုကစာရွက်စာတမ်းများပါသောဖိုင်တွဲအချို့ကိုဖန်တီးရန်ဖြစ်သည် သတင်းအချက်အလက်ကိုမပျက်စီးစေရန်သို့မဟုတ်ပျောက်ဆုံးရန်အတွက်ဖြစ်သည်။
အသုံးအများဆုံးကတော့ directory file အချို့ရွှေ့ရန်ဖြစ်သည် ဒီအတွက် mv command ကိုသုံးမယ်။
ဒီမှာကျွန်တော်တို့လုပ်နေတာက file.txt ကိုစာရွက်စာတမ်းဖိုင်တွဲထဲရှိ test folder ထဲသို့ရွှေ့ပြောင်းလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းအတွက်ကျွန်ုပ်တို့ file.txt တည်ရှိရာ directory ထဲတွင်ကျွန်ုပ်တို့နေရာချထားသည်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားသည်
တစ်ချိန်တည်းမှာဖိုင်တစ်ခုထက်ပိုပြီးရွှေ့ချင်တယ်ဆိုရင်၊ syntax type သည်အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည် -
ယခု အလွန်အသုံးဝင်သောအရာတစ်ခုမှာ * ကိုအသုံးပြုရန်ဖြစ်သည်။ ဖိုင်များသည်နာမည်တူအခြေပြုသည့်အခါဥပမာ၊
သိကောင်းစရာများ - သင်သိသင့်တဲ့ GNU / Linux အတွက် command 400 ကျော်
ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်နိုင်သည့်အတိုင်း၎င်းတို့တွင်ဖိုင်အားလုံးအားတူညီသောအခြေခံ nomenclature ဖြင့်ရွှေ့ပြောင်းရန် AMD အခြေခံတစ်ခုတည်းရှိသည်။
တူညီသောအမျိုးအစားရှိသည့်ဖိုင်များအားလုံးအတွက်ဥပမာ .doc, .xls, .deb, .rpm စသည်တို့အတူတူပင်ဖြစ်သည်။ သူတို့ကိုရွှေ့ဖို့ကျနော်တို့သာလျှောက်ထားသည်
၎င်းအတွက် * ကိုအသုံးပြုမည်ဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ကျွန်ုပ် WordPress မှ compressed လုပ်ထားသောအရာအားလုံးကိုယခင်လမ်းညွှန်နှစ်ခုသို့ရွှေ့ချင်သည်။
command ကိုသိချင်တယ်ဆိုရင်သူရဲ့ man ကိုသုံးမယ်ဒါမှမဟုတ် -help parameter နဲ့သုံးမယ်။ ဒီမှာသူ့ရဲ့ parameters အားလုံးကိုမြင်ရလိမ့်မယ်။
ဖိုင်များကို Linux တွင်မည်သို့ကူးယူရမည်နည်း။
ဤကိစ္စတွင်သည် ဒါနဲ့မတူဘဲနီးပါးဆင်တူသည်ဖိုင်များသို့မဟုတ်ဖိုင်တွဲများကိုတစ်ခုမှတစ်ခုသို့ရွှေ့ရန် ဖိုင်များနှင့်ဖိုလ်ဒါများကိုသူတို့၏မူလနေရာတွင်ထားပါ ရွေးချယ်ထားသောလမ်းညွှန်တွင်မိတ္တူတစ်ခုဖန်တီးပါ။
Un ဖိုင်တစ်ဖိုင်သို့မဟုတ်ဖိုင်တွဲကူးယူရန်ရိုးရှင်းသော command ကို လမ်းညွှန်တစ်ခုမှတစ်ခုသို့
၎င်းကိုကြည့်ရှုရန် ပို၍ ရှင်းလင်းပြတ်သားသောနည်းလမ်း
ဤ command သည်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုပြုလုပ်မည့်ဖိုင်သို့မဟုတ်ဖိုင်တွဲကိုအရန်ပြုလုပ်ရန်များသောအားဖြင့်များသောအားဖြင့်များသောအားဖြင့်ကော်ပီတစ်ခုကိုဖန်တီးသည်၊ သို့သော်အခြားအမည်ဖြင့်လက်တွေ့ဥပမာတစ်ခုမှာ -
ယခု ကျွန်ုပ်တို့နေရာချထားသည့်ဖိုင်တွဲပါရှိသောအရာအားလုံးကိုကူးယူလိုလျှင် အခြားလမ်းညွှန်သို့:
ကျွန်ုပ်တို့ကူးယူမည့်လမ်းကြောင်းအောက်ရှိအဆင့်တစ်ခုရှိရန်အရေးကြီးသည်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့အတွင်း၌သာရှိလျှင်လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံကိုဖော်ပြရန်လိုအပ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ကျွန်ုပ်တို့သည် command ကိုငါထားရှိသည့်အတိုင်းသာထားလျှင်၎င်းကိုသာဖန်တီးလိမ့်မည်။ နေရာလွတ်တစ်ခု။
နောက်ဆုံးအနေဖြင့်၎င်းင်း၏ parameters များကိုသိလိုလျှင်၎င်းသည်လူသားသို့မဟုတ် –help ကိုအားကိုးသည်
နောက်ထပ် ado မရှိရင်သူတို့ဟာအခြေခံကျတဲ့ command တွေပါ။ သူတို့အသုံးပြုတာကမင်းကိုအများကြီးကူညီနိုင်မှာပါ။ -r parameter နဲ့အသုံးပြုတဲ့ recursive form ကိုအမြဲတမ်းအသုံးပြုဖို့အကြံပြုထားလို့သူတို့ကိုသတိထားသင့်ပါတယ်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » သင်ခန်းစာများ / လက်စွဲ / သိကောင်းစရာများ » ဖိုင်များ (သို့) ဖိုင်တွဲများကို Linux ထဲဘယ်လိုရွှေ့ပြောင်းမလဲ။
Jorge ကို C Rodriguez S က ဟုသူကပြောသည်
cp / * / name / folder / destination သို့ ??
ငါကူးယူရန်ဖိုင်များရှိရာ folder ထဲမှာရပ်နေ ??
Jorge C Rodriguez S ကိုစာပြန်ပါ
Juan Manuel Carrilllo Campos ဟုသူကပြောသည်
တိကျတဲ့မှတ်တမ်းမှတ်ရာအမြောက်အများကို source-file မှ destination-file သို့ကူးချင်တယ်၊ တစ်ခါတစ်ရံမှာ record-to-range အထိဖြစ်တယ်၊ ငါဘယ်လိုလုပ်နိုင်လဲ။
Juan Manuel Carrilllo Campos အားပြန်ကြားပါ
Swap ဆိုတာ Linux ထဲမှာဘာလဲ။ ဘယ်လိုသုံးရမလဲ။
Linux Mint တွင် AMD gpu pro drivers များကိုမည်သို့တပ်ဆင်ရမည်နည်း။